Olan'ny fitateram-bahoaka :: Hitoroka ny fihoaram-pefin’ireo mpitatitra ny mpandeha eny Ambohitrimanjaka • AoRaha
Olan’ny fitateram-bahoaka Hitoroka ny fihoaram-pefin’ireo mpitatitra ny mpandeha eny Ambohitrimanjaka
Hanao hetsika hanoherany ny fampiakarana saran-dalana sy ireo antsojay ataon’ny mpitatitra amin’ny zotra mampitohy ny renivohitra amin’ Ambohitrimanjaka ny solontenan’ny mpanjifa, amin’ny sabotsy ho avy izao.
« Hisy ny fanaovana tatitra amin’ny mponin’ Ambohitrimanjaka mikasika ny akon’ny fivoriana natao tany amin’ny Antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety ( ATT) sy ny mpitatitra ary izahay solontenan’ny mpanjifa momba ny fanatsarana ny fitaterana amin’io zotra io », hoy ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ny fikambanan’ ny mpanjifa amin’ny zotra mampitohy ny renivohitra amin’ Ambohitrimanjaka, omaly. Ny fisian’ny olana izay sedrain’ireo mpanjifa ankehitriny no anton’izay fihaonana kasaina hatao izay, raha ny fantatra.
Araka ny fanazavan’ ny solontenan’ny mpanjifa hatrany dia efa maro ireo fitarainana voarain’izy ireo amin’ny fihoaram-pefy ataon’ny mpitatitra. Eo ihany koa ny tsy fanarahan’ireto farany ny hevitra tapaka nandritra ny fivoriana natao. “Nanomboka ny sabotsy lasa teo dia niakatra ho fitonjato ariary ny saran-dalana. Efa saika nampihatra izany ny ankamaroan’ny mpitatitra. Tsy zakan’ny mpanjifa anefa izany fa tokony ho ariary zato ihany ny fiakarana na misy aza izany. Efa tapaka nandritra ny fivoriana natao niarahana tamin’ny ATT rahateo fa omena iray volana aloha ny mpitatitra hanofanana ny mpamily sy ny mpanampy azy alohan’ny hisian’ny fiakarana. Tsy tapitra akory anefa ity fe-potoana izay napetraka ity dia efa mihatra ny fampiakarana”, hoy hatrany ny fanampim-panazavana.
Nanambara kosa ny mpitatitra sasany fa ny faharatsian’ny lalana no tena antony hampiakaran’ izy ireo ny saran-dalana. “ Betsaka loatra ny fatiantoka ateraky ny fitohanana noho ny lalan-dratsy satria ny olona rehetra mampiasa iny lalana iny dia mahatsapa izany avokoa”, araka ny fanazavan’ny mpamily iray. Nanamafy rahateo ny avy ao amin’ny fikambanan’ ny kaoperativa fitaterana ivelan’ny renivohitra fa tena maharitra ny fitohanana amin’ny lalana iny ka tokony mba hitsinjo ireo mpitatitra ny mpandeha. “ Ny olana amin’iny zotra iny dia maro tokoa saingy tokony andrasana mihitsy aloha ho vita ny fanamboaran- dalana dia miverina mifampiresaka indray”, hoy hatrany ity loharanom-baovao ity.
Voina teto an-drenivohitra :: Olona enina matin’ny lozam-pifamoivoizana tao anatin’ny iray volana
Kitra – « THB champions league » :: Nianaran’ireo mpifanandrina taminy namono baolina ny JSA Antalaha